XOGO QARSOON: Sidee ayuu ku Bilowday Dagaalka Somalia & Itoobiya, Waqtigee ayuuse bilowday? – Shacabka News
Waxaa Berlin lagu qeybsaday Afrika, dalka Soomaaliya waxaa loo kala qeybiyay Shan:
Koofurta oo qeyb ahaan loo siiyay Talayaaniga, Waqooyiga ama Somaliland oo qeyb loo siiyay Ingiriiska, waxaa kaloo Ingiriiska la siiyay Labada Gobol sida Koofur Galbeed oo haatan Xabashida Gumaysato iyo N.F.D oo weli ku jirta gacanta Gumaystaha Kenya halka dhulkii loo yaqaanay xeebta Soomaaliya ama Djibouti qeyb ahaan loo siiyay dalka Faransiiska.
Qarnigii 16-naad Xabashi waa u xasuus madoow, Qarnigaas waxaa noolaa Imaamka Soomaaiyeed ee Axmed Guray, waxaa uu dagaal ku qaaday xabashida oo dhulkoodii qabsaday, waxaa uu Imaam Axmed Guray ka talin jiray dhulka maanta loo yaqaano Soomaaliya, Kenya, Itoobiya, Djibouti, Eritrea, Suudaan iyo qeyb ka mid ah Masar.
Maamulka Imaam Axmed Guray waxaa uu gaaray ilaa Nuba (koofurta Masar), intaa kadib Cadawga burtuqiiska ayaa sida gaalada lagu yaqaano usoo hiilay xabashida.
Xabashida waxaa ay dagaal la gashay Sayidka iyo Ciidankii Darwiishta intii u dhaxeysay 1900-1920-kii, Laakin ciidanka Sayid dhibka Xabashida waxaa ugu darnaa kan Ingiriiska, oo waxaa ay aad ugu mashquuleen dagaalka Ingiriiska, Waxaa la sheegaa in Sayidka iyo Ciidankiisa ay dagaal ku tageen ilaa Jigjiga, guulo badan ay kasoo hooyeen Itoobiya.
Waxaa xusid mudan in Itoobiya uu Gumeytaha Ingiriisku siiyay dhul Soomaaliyeed 1654-tii Waa gobol balaaran oo badhkiisu ka badan 25,002 KM, Waxaa uu ka koobanyahay Gobolo iyo magaalooyin caan ah sida: Jigjiga, Dhagaxbuur, Godey, Qabridahare, Shilaabo, Wardheer, Awbarre iyo Raso.
Bishii February 1964, waxaa uu dagaal dhex maray Ciidamada geesiyaasha dalkeena iyo cadawga Itoobiya, dagaalkaas waxaa uu socday ilaa April, Labada cadaw ee Kenya iyo Itoobiya, waxaa ay ku heshiiyeen in Soomaaliya ay iska dhiciyaan.
Maxamed Siyaad Barre oo ka mid ahaa dadkii ka qeyb galay dagaalkii 1964-tii ay Soomaaliya la gashay Xabashida ayaa madax noqday 1969-kii.
Jaalle Siyaad waxaa uu xoogiisa koobaad, Labaad iyo Sedexaad saaray dhismaha ciidanka qaran oo xoog leh, Sanado yar kadib, Soomaaliya waxaa ay noqotay Ciidanka ugu awoodda badan Afrika halka xabashida ay daciiftay waayo waxaa ka dhacay Inqilaab, February 1974 waa la afgambiyay Boqorkii boqoradda Itoobiya Haile Selassie, waxaa markii dambe dalkaa Madaxweyne ka noqday 3 February 1977 Mengistu Haile Mariam.
Ciidankeena qalabka sida waxaa ay ka faa’ideysteen isbadallada ku imaanaya cadawga iyaga oo qaaday weerar iyo olole loogu magac daray”Xoreyntii Soomaali Galbeed”.
Jigjiga waxaa ay soo gashay gacanta xoogagga Soomaaliya 2 September 1977, xiligaas waxaa dalkeena Wasiirka difaaca ahaa Maxamed Cali Samatar, waxaa kaloo dagaalka hogaaminayey rag cadawga xiligaas ka cabsan jiray sida Maxamed Cumar Jees, General Galaal, Col. Maxamud Ciro, C/llaahi Yuusuf Axmed iyo hogaamiyaal kale.
Geesiyaasha qalabka sida waxaa ay si fudud ku qabsadeen Mustaxiil, Wardheere, Dhagaxbuur, Godey, Qalaafe, Qabridahare, Jigjiga iyo magaalooyin kale, Soomaaliya oo dhan waxaa ay u midoobeen cadawga iyo jabkiisa, waxaa dalka ka socday damaashaad iyo Midnimo.
Author Mohamed YarePosted on 02/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTA
Previous Previous post: Maxaadan Ogeyn oo maanta ka socda Magaalada Muqdisho.?
Next Next post: DEG DEG: Cabsi ka jirta Magaalada Cadaado & Al shabaabkii ugu badnaa oo ku dhow.